Play Store မှ malware? | Androidsis
ရက်သတ္တပတ်ခုနစ်ပတ်ကြာပြီ Android မှ application application တစ်ခု၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်မမှန်မှုများကိုဤတွင် Androidsis ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှုတ်ချသည်ဘယ် ပုံနှင့်အမြဲပါမယ်စကားပြော ထံမှစကင် data ကိုအတူ virustotal.com Que developer ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ applications များအပေါငျးတို့သရောဂါကူးစက်အဖြစ်မှတ်သားနေကြသည်.
ယနေ့သော developer တစ် ဦး(ဒီ post ကိုမရေးခင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထပ်စစ်လိုက်တယ်)ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအပါအ ၀ င်မည်သည့် Android အမျိုးအစားမှမဆိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Androidsisvideo ယူကျု့ချန်နယ်မှအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်ရာသီဥတုအသုံးချမှု၏ထောက်ခံချက်အရပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဤသတိပေးချက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာတွေကိုမင်းကိုအကြံပေးဖို့၊ သင်ပေးဖို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အရာအားလုံး၊ virustotal.comနှင့်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်နေ့သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အရှိဆုံး၊ ကျွန်ုပ်၏နှိုးစက်သည်တေးဂီတကိုညီမျှသောအပလီကေးရှင်းဖြင့်ထပ်မံပြတ်သွားသည်.
Google အနေဖြင့်မူ Androidsis အသုံးပြုသူများပေးပို့သောလုံခြုံရေးသတိပေးချက်များကိုဂူဂဲလ်မှလျစ်လျူရှုသည်ကိုတွေ့သောအခါငါသည်ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီး အထက်ဖော်ပြပါရာသီဥတုအခြေအနေလျှောက်လွှာ၏တိုင်ကြားချက်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ၎င်းသည်ငါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခဲ့သောလျှောက်လွှာအားလုံးတွင် developer ၏ modus operanding ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဖြတ်. virustotal.com.
အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ပုံစံမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တိုင်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်ပြီး ၄၈ နာရီအကြာတွင်ဖြစ်ပြီး၊ ဂူဂဲလ်မှတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်နှစ် ဦး မတိုင်ပင်မီကျွန်ုပ်သည်ဤစာမူကိုထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ သင့်အားအသိပေးရန် ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲအတွက် ဤ HowarJran ၏မည်သည့် application ကိုမဆို download ပြုလုပ်၍ မတပ်ဆင်ရန်သတိပေးပါ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာဂူဂဲလ်မှတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ထံမှအပလီကေးရှင်းများသည်သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်စေ၊
ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ သငျသညျ၏ applications များတွေ့နိုင်ပါသည် မင်္ဂလာပါဗွီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းစစ်တဲ့ applications တွေ အနည်းဆုံးတော့၎င်းတို့သည်သံသယဖြစ်ဖွယ် application များဖြစ်ပြီး Android တွင်တပ်ဆင်ရန်မသင့်တော်ဟုပြောနိုင်သည်.
ဒီ link မှာ မင်းဘယ်လိုမြင်လဲ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဒုတိယကူးစက်မှုသည်ကူးစက်ခံထားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းသတိပေးခြင်းကိုခုန်တက်ခဲ့သည်အသုံးပြုသူများထံမှသက်ဆိုင်သောတိုင်ကြားချက်များအပြီးတွင်၎င်းကို Google Play စတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည်
ထို့နောက်ငါ Youtube ပေါ်ရှိ Androidsisvideo channel သို့တင်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ဝေနိုင်ရန်အတွက်သင့်အားထားခဲ့ပါ ဤသဘောသဘာဝကိုဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သတင်းပို့သည်လွန်ခဲ့သောအပတ်ကသူ၏တိုင်ကြားချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား Mountain View မှတာဝန်ရှိသူထံမှမည်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှမရရှိသေးပါ။
1 ALERT !! ဖြစ်နိုင်သည့် malware ကိုဤအက်ပ်ကိုမထည့်ပါနှင့်
2 ALERT !! HowarJran အက်ပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း
3 ယေဘုယျအားဖြင့်သင့် Android အားအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် malware များမှဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
4 ALERT !! ကျွန်ုပ်တွေ့သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းမှာကူးစက်ခံထားရသည်
5 ALERT !! ဂူဂဲလ်မှတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ
ALERT !! ဖြစ်နိုင်သည့် malware ကိုဤအက်ပ်ကိုမထည့်ပါနှင့်
ALERT !! HowarJran အက်ပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့်သင့် Android အားအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် malware များမှဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ALERT !! ကျွန်ုပ်တွေ့သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းမှာကူးစက်ခံထားရသည်
ALERT !! ဂူဂဲလ်မှတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ
ဒီနောက်မှဂူဂဲလ်မှသူတစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးဤကဲ့သို့သော HowarJran ၏အပလီကေးရှင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Virustotal app သို့မဟုတ် virustotal.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အန္တရာယ်ရှိသော application များသို့မဟုတ်ကူးစက်ခံရသည့် application များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာသည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏ Android ကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် malware များမှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်းခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောဗီဒီယိုနံပါတ် ၃ ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။ သင်၏ဗွီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ Android ကိုလုံခြုံအောင်ထားရန်ကြိုးစားသင့်သည် သူတို့ဟာဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပမှဖြစ်စေ၊ malware နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အပလီကေးရှင်းများမှဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Play Store မှ malware?
Galaxy S10 အတွက် Android 10 ဆဌမ beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
Huawei Mate X ၏မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ယူရို ၉၀၀ ကျော်လွန်သည်